जापानमा नेपाली खाद्यान्नको स्वाद लिन चाहनुहुन्छ भने खुल्यो ऋदम मार्ट, घरमै आइपुग्छ खाद्यान्न – Nepal Sandesh
जापानमा नेपाली खाद्यान्नको स्वाद लिन चाहनुहुन्छ भने खुल्यो ऋदम मार्ट, घरमै आइपुग्छ खाद्यान्न
चिवा । घर घरमा अर्डर अनुसारको खाद्य सामग्री, त्यो पनि जापानमा । कति सम्भव होला ? पक्कै पनि मुस्कील छ । तर, एक नेपाली युवाले जापानको चिवामा होम डेलिभरी सेवा सहित खाद्यान्न बिक्रि वितरण सुरु गरेका छन् । जापानको चिवा केनमा ऋदम मार्ट सञ्चालनमा आएको छ र उक्त मार्टले सबैखाले खाद्य सामग्रीहरु चाहना अनुसार घर घरमै पुर्याइदिन्छ ।
पढ्दा अचम्म लाग्यो ? अब अचम्म मान्नु पर्दैन । बाग्लुङको गलकोट स्थायी बासिन्दा नविन निउरेले सञ्चालन गरेको ऋदम मार्टमा यी सबै सुविधा छन्, त्यो पनि अत्यन्तै सुलभ मुल्यमा ।
सुरूवाती लगानी १ करोड रहेको उक्त मार्टमा नेपाली र भारतीय उपभोक्ता केन्द्रीत छ । तर, अन्य देशका नागरिकहरुले पनि माटर्मा किनमेल गर्न आउने गरेमा निउरेले बताए । मार्टबाटै बिक्रि हुने गरेको र होम डेलिभरी सुविधा समेत दिइएकाले मार्टमा ग्राहकको आकर्षण बढीरहेको निउरेले बताए ।
दश वर्ष पहिला जापान आएको निउरेले कडा मेहनतका कारण आफु यो अवस्थामा आइपुगेको बताए । उनले नेपाली समुदायबाट सहयोग र सद्भाव पाइरहेकाले आफु सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले आफ्नो जन्मभुमीमै व्यापार व्यावसाय गर्ने लक्ष्य लिएको पनि बताए । देशको तरल राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक पार्टीहरुले अपारदर्शीं ढंगले चन्दा आतंक मच्चाउने लगायतका समस्याका कारण आफु तत्काल नेपालमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा नरहे पनि भविष्यमा नेपालमै व्यावसाय गर्ने बताए । निउरेले जापानबाट नेपाल सैसा पठाउने जेनिथ रेमिटमा पनि लगानी गरेका छन् ।